Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Dhalinyarta OYSU London Maxuu ku saabsana? Open Day 13 April 2013!
Shirkii Dhalinyarta OYSU London Maxuu ku saabsana? Open Day 13 April 2013!
Posted by ONA Admin	/ April 6, 2013
Ururka dhalinyarada OYSU London ayaa dadaalo aad u xoog badan ka bilaabay caasimada London. Ururka ayaa maanta isugu yimid shir balaadhan oo lagu qiimeynayay qorshe abaabul oo magaalada London ay kawadaan qorashahaas oo Bishan 13 April lagu soo gaba gabeyn doono kulan aad u balaadhan oo loo qabanayo dhalinyarada kasoo jeeda dhulka Somalida Ogadeniya.
Gudomiyaha OYSU mudane Mustafe Diirane ayaa warbaahinta ONA u sheegay in isbadal weyn lagu sameeyay qaabshaqeedkii ururka OYSU faraca London. kadib markii wada tashi dheer lasameeyay islamarkaasna qaabab cusub oo casri ah loo badalay abaabulka dhalinyarada iyo Barnaamijyo ururka OYSU London fulin doono sanadkan. Shirka maanta dhalinyarada OYSU isugu yimid Xafiiska Jaaliyada isaga oo kawaramaya waxa uu sheegay Xoghayaha OYSU London
“Maanta waxaan qaadanayna tababaro dhinaca abaabulka ah iyo sida loola hadlo qofka cusub ee aad rabto inaad xubin ka dhigto.”
Dhalinyarta OYSU London ayaa maanta waxaa ay qaateen casharo badan oo qaabka bulshada loola hadlo ah. Waxaa xiiso badan lahaa oo indhahayga soo jiitay jilitaan ay sameyeen dhalinyaradu markii tababarku socday.
Waxaa soo istaagtay gabadh kamid ah OYSU iyo wiil kamid ah OYSU balse matalaya innuu yahay xubin cusub oo kasoo jeeda somalida Ogadeniya islamar ahaantaasna wax aqoon ama xoghabayaraate ka heyn Qadiyada Ogadeniya ama shaqada ururka OYSU… Halkaas ayaaa isbarasho kadib waxaa la isweydiiyay qofkasta magaciisa iyo waxa uu barto ama shaqada uu hayo.
Intaas kadib Xubinka OYSU ayaa kawaramaya sida OYSU u holwgasho shaqooyinka ay qabtaan. Projectiyada ay hada fulinayaan iyada oo si aad u xiiso badan usoo dhigtay.. markaas ayuu weydinaya sheeko gaaban kadib innuu xiisaynayo ururkaas rabona innuu ka qeyb galo barnaamijyadaas oo dareen ku abuuray. Kadibna halkaas waxaa lagu kala qaadanaya xogta qaabka looga mid noqon karo ururka.
Tababarkan ayaa loo sameynayay shirweyne loo qabanayo dhalinyarta kasoo jeeda Somalida Ogadeniya 13 April halkaas oo boqolaal xubnood oo dhalinyaro ah isugu imaan doonaan. dhalinyartaas oo xiisaynaysa inay kusoo biiraan Ururka OYSU.
Hadaba dhalinyarta OYSU ayaa jaanis u siinaysa dhalinta Somalida Ogadeniya inay kusoo biiraan ururka OYSU islamarkaasna ay ka faa’ideystaan howlaha faraha badna ee ururku qabto. Xafiiska Jaaliyada somalida Ogadeniya ee London ayaa maanta waxaa durbaba iska qoray dhalinyaro aad u tiro badan. dhalinyartaas oo ay isla socdaan waalidiintooda iyo saxiibadooda horey uga midka ahaa ururka OYSU. waxaana wali socda isdiwaan galinta kasoo qeybgalka daah furka OYSU ee nooca xubinimada Open Day 2013.
Sidoo kale dhalinyaradi kasoo qeybgashay kulanki maanta ayaa waxaa loo sameeyay caawimaado dhanka shaqaaleynta ah iyaga oo laga caawiyay sida loo sameysto CV, markii qof rabo innuu shaqo galo. Ururka dhalinyarta OSYU ee London ayaa bixin doona taakuleyn badan oo uu siiyo dhalinyarta somaliyeed ee ku nool wadanka UK.
Sidoo kale waxaa shirkii maanta lagu soo bandhigay Xasuuqa ka socda Ogadeniya. Waxaa lasoo bandhigay dad kor u dhaafaya 300 qof oo somalida Ogadeniya ah oo bilowgi bishii November 2012 illaa 3o March 2013 lagu waxyeelayay gudaha Somalida Ogadeniya. dadkaas ayaa isugu jira dad la dilay, Kufsi, Jidh dil iyo xidhay iyo boob loogu geystay dhulka somalida Ogadeniya. Liistada dadkan oo isugu jira caruur laba bilood jirta illaa 89 jiro kamid ah somalida Ogadeniya. Sidoo kale waxaa liistada dadkan u badnaayeen haween.
Waxaa kale oo la daawaday filimaan ka hadlaya Xasuuqa ka jira Ogadeniya iyo kaalinta OYSU London ka qaadan karto sidii looga hortagi lahaa.
Ugu danbeynti Ururka OYSU London ayaa ugu baaqaya dhalinyarta somaliyeed ee kasoo jeeda dhulka Ogadeniya ee ku nool magaalada London inay ka faa ideystaan jaaniska uu bixinayo OYSU maalinimada Sabtida oo lafilayo in xubno badan loo qaato ururnimada OYSU London.
Dhamaan waalidiinta waxaa la ogeysinaya inay dhalinyartooda keenaan maalinkaas, waa ay soo raaci karaan waalidku dhalinyarada iyaga oo kusugi doona mudada uu shirku u socdo Qolka Martida ee Jaaliyada Somalida Ogadeniya.
Goobtu waa Hallka Shirarka ee xafiiska Jaaliyada Somalida Ogadeniya:
16 Arches Business Centre. Merrick Road, Southall UB2 4AU
13 April 2013 1PM- 5PM
Telf: -07504285299 or 07508521964